Waxa uu Pogba ka yiri Neymar oo wadno kur kur ku riday taageereyaasha Manchester United – Gool FM
Waxa uu Pogba ka yiri Neymar oo wadno kur kur ku riday taageereyaasha Manchester United
(Mancehster) 20 Mar 2018. Laacibka khadka dhexe ee Mancehster United Paul Pogba ayaa sheegay in ay farxad u ahaan lahayd ka garab ciyaaridda Neymar Jir.
Hadalka Pogba ayaa ku beegmaya xilli labada laacib uu mad madow saran yahay aayahooda halka lala kala xiririnayo in ay xagaaga ka kala tagayaan kooxohooda.
Pogba mushaakil ayaa ka soo food saaray qaab ciyaareedkiisa waxaana la dhigay kaydka marar badan ol’olehan.
Neymar waxaa aad loo baahiyey in uusan ku qanacsaneyn Paris Saint-Germain oo uu gadaal ka riixayo dadaalo uu ugu biirayo Los Blancos.
Brazilian-ka waxa uu haatan dhaawac uu dartii qallin u galay kaga soo kabanayaa dalkiisa.
Pogba oo u warramaya telefishin laga leeyahay Argentina TyC Sports ayaa yiri: “Haa, Neymar waan jeclahay. Waxa uu leeyahay astaanta farxadda garoonka.
“Brazil, kubadda cagta waa u wax walba. Nolol ayey Brazil ka tahay. Kuadda cagta qof walba wuu ciyaaraa. Waan jeclahay in aan garoonka ku arko isaga oo ciyaaraya, tayadiisa iyo kartidiisa. Waa naqshad kale.
“Marka aad tiraahdo ereyga ‘Neymar’ adoo dunida dacaladeeda jooga, qof walba waxa uu yaqaan qofka uu yahay iyo waxa uu sameeyo. Sidaas daraadeed waan la ciyaari karaa maalin maalmaha ka mid ah, farxad ayey ahaan doontaa.’
SAWIRRO: Lionel Messi iyo Xertiisa oo Tababar ku sameynaya Garoonka Manchester City ka hor kulankooda...
Funaanadda 2-aad ee xulalka ka qaybgelaya KA2018 oo lasoo bandhigay + Sawirro